खाना खाएपछि गर्दै नगर्नुस् यी काम, ज्या’ नै जान सक्छ ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं – Annapurna Daily
खाना खाएपछि गर्दै नगर्नुस् यी काम, ज्या’ नै जान सक्छ ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं
On Jun 21, 2021 730
एजेन्सी । खाना खाइसकेपछि व्यक्ति आरामको मुडमा पुग्छ र आराम अनुभव गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलाक्प गर्छ। कति व्यक्तिहरु खाना खासकेपछी तुरुन्तै काममा कुद्ने पनि हुन्छन् ।
खानाले शरीरमा शक्ति दिन्छ, भोक मेटाएर आनन्द दिन्छ। तर आफ्नो खानाको समयलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । खाना के खाने मात्र होइन, खाना कुन समयमा खाने र खानाको अघिपछि के खाने , के नखाने भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ ।
साथै त्यसले पाचन प्रक्रियामा पनि असर गर्छ । त्यसैले खाना खाएपछि कम्तीमा पनि तीस मिनेट पछि मात्र चुरोट पिउनुपर्छ । खाना खाएपछि अल्छी लाग्नुका साथै मीठो निन्द्रा पनि आउँछ । दिउँसो होस् या राती, धेरै मानिसको बानी खाना खाइसकेपछि तुरुन्तै सुत्न जाने हुन्छ । हामीले खाएको खाना माथी मुखबाट तल पेटमा जानु पर्ने हुन्छ।
त्यसैले खाना खाइसकेपछि सुत्दा या ढल्किंदा, खाना पेटमा पुग्ने गति कम हुन्छ । यसले खाना राम्रोसंग पच्न पाउँदैन । खाना खाएपछि तुरुन्तै सुत्दा या ढल्किदा पेटको एसिड माथी तिर आउँछ । त्यसले एसिडिटी बढ्ने, छातीमा जलन हुने समस्या उत्पन्न हुन्छ। सामन्यतया खाना खाइसकेपछि गुलियो खानेकुरा खाने बानी हुन्छ।